စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်း - စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် NBCO
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
●ဘဏ်အကောင့်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့ဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းမှု
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရှိသော Offshore ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Offshore Company တွင်ပါဝင်ခြင်းရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်
ထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာသည်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးတို့မှစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) ခုအတွက်ဖောက်သည်များအားအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ပါဝင်သောသင်၏ကုမ္ပဏီတွင် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အပြည့်အ ၀ ပေးအပ်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက် Virtual နံပါတ်၊ CRM Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ဖြေရှင်းမှုများ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ virtual office၊ Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 109 အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။
သင်၏ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ကိုယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ကိုရှာပါ
နိဒါန်း Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းမှု
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့ကိုအာဏာပိုင်များက - စိန့်ခရစ်စတိုဖာနှင့်နီဗတ်စ်ဖက်ဒရေးရှင်း၊ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အတွင်းရှိအပူပိုင်းကျွန်းနှစ်ကျွန်းနှင့် Leeward ကျွန်းများကို Puerto Rico ၏အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ဝန်းကျင်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၁၆၂၃ တွင်ဗြိတိသျှတို့ကပထမဆုံးအခြေချခဲ့သည်။ ၁၈၁၆ တွင်စိန့်ကစ်စ်၊ နီဗစ်၊ အန်ဂျီလာနှင့်ဗာဂျင်းကျွန်းများသည်ဗြိတိသျှလက်အောက်ခံပြည်နယ်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြည့်ရှိသောကျွန်းများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်။
၁၉၈၁ တွင်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗ်စ်တို့လွတ်လပ်မှုရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ တွင်စိန့်ကစ်မှခွဲထွက်ရန်တင်ပြချက်အပေါ်နီဗ်စ်၌မဲဆန္ဒပေးမှုသည် ၆၆% လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်အသားကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့သည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အစိုးရပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချုပ်အခြာအာဏာရှိအဲလစ်ဇဘက် ၂ သည်နိုင်ငံတော်၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံချုပ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis (ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် ၂) တို့၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တစ်ထပ်တည်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (ပါလီမန်) ကိုကျွန်းညီညွတ်သောပြည်နယ်များကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်အဖြစ်လူသိများသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ဘဏ္financialာရေးစနစ်သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်အခြေခံသည်။ ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်သဘာ ၀ သယံဇာတအဖြစ်၎င်း၏စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှမှုများရှိနေသော်လည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်အစိုးရသည်သကြားလုပ်ငန်းကိုလုံးဝပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေကော်မရှင်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေအရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု မှလွဲ၍ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသူများကိုထိန်းချုပ်ရန်တပ်ဆင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်းနိုင်ငံ၏ဘဏ္systemာရေးစနစ်ကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းမှတဆင့်တွန်းတင်နေသော်လည်းသကြားနှင့်သွယ်တန်းပြီးဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်အဆက်မပြတ်တိုင်းပြည်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းဂျီဒီပီတိုးတက်နှုန်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူစီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့်ကျွန်းနိုင်ငံကိုထူးဆန်းသောဈေးကစားသူများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ကျော်ကြားသောရည်မှန်းချက်ကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်ပြည်နယ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောထင်မြင်ချက်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုးချဲ့ခြင်းအပေါ်ကယ်တင်ခဲ့သည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောအေဂျင်စီများအတွက်အကျိုးရှိသည့်စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်းနိုင်ငံတွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသောလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်၊ ၎င်းအားအခြေခံအားဖြင့်လျင်မြန်စွာငွေကြေးတိုးတက်မှုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ စီးပွားရေးစနစ်၏ဤတည်ငြိမ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်းနိုင်ငံအတွင်း၌စီးပွားဖြစ်စီးပွားဖြစ်ရာသီဥတုကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တွန်းအားပေးနိုင်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှုနှင့်ခိုင်မာသောဥပဒေများကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ်မှတည်ငြိမ်သောနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ အဓိကအခြေခံသည်နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဝါသနာကိုကူညီရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကျွန်းငယ်လေးတွင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းများအဖြစ်မရင်းနှီးသောကော်ပိုရေးရှင်းများစွာကိုစွဲမက်စေခဲ့သည်။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့မှကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားစတင်ခြင်းနှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းခြင်းအတွက်သင့်အားကူညီပေးပါသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ဖြေရှင်းချက်များ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ virtual office၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ virtual နံပါတ်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Web development၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ nt Kitts နှင့် Nevis, Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Saint Kitts နှင့် Nevis၊ Offshore ကုမ္ပဏီများဖွင့်လှစ်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ရှိကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိ HR ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိစီးပွားရေးရောင်းဝယ်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗ်စ်ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်များအကောင့်နှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ Nevis သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Ecommerce Development၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Saint Kitts နဲ့ Nevis မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုမှာ ၀ န်ဆောင်မှုအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစတင်ပေးပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်
Saint Kitts နှင့် Nevis စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Saint Kitts နှင့် Nevis / Payment Gateway Saint Kitts နှင့် Nevis
Saint Kitts နှင့် Nevis စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတို့၏ဒါရိုက်တာအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Saint Kitts နှင့် Nevis
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Saint Kitts နှင့် Nevis Offshore ကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis Offshore ကုမ္ပဏီများအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြပါ
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis Business Corporation အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြေး Saint Kitts နှင့် Nevis (ပထမနှစ်) - ဒေါ်လာ ၅၆၉
●စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေခအတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်း
●စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိ Nevis Business Corporation အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
● Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis Business Corporation အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးအပ်ရန်
● Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ခန့်တာဝန်ပေးခြင်း
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများအတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်သဘောတူညီချက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ပုံစံ။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ဘဏ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ကုန်သည်စာရင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်တရားဝင်အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုတိုးပွားလာခြင်း
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့ကိုသန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများမှတဆင့်
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုလျှင် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို ရှင်းလင်း၍ ဘက်မလိုက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရှိသောဖောက်သည်များနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်ကြောင့်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်ရန်နှင့်သင်လိုအပ်လျှင်ကူညီပေးပါမည်။ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်သည်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ စိန့်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများပါ ၀ င်သည့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင့်အားပေးနိုင်ပါသည်။ Kitts နှင့် Nevis တို့၊ သင်လျှောက်ချင်လျှင် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏နေထိုင်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်တော်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်.
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များဖြစ်သော Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များအားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အမြတ်အစွန်းများပြားလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်သင်သည်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ပေးသည်။
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများအားအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာ” သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများသင့်အတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိနေသည်။
စိန့်ကစ်စ်ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှာစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ရှိ Nevis / NBCO တို့ဖြစ်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
စိန့်ကစ်ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအသင်းနှင့်စာချုပ်များနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိ Nevis / NBCO ၏စာချွန်လွှာ
စိန့်ကစ်စ်ရှိ Nevis Business Corporation နှင့်စိန့်ကစ်စ်ရှိ Nevis / NBCO အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် Nevis အသိအမှတ်ပြုစာအုပ်။
စိန့်ကစ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Nevis / NBCO ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ စိန့်ကစ်ရှိ Nevis Business Corporation နှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis / NBCO အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကစိန့်ကစ်ရှိ Nevis Business Corporation နှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိ Nevis / NBCO ။
စိန့်ကစ်စ်ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် Nevis / NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Saint Kitts ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis / NBCO:
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ခွင့်ပြုချက်ရယူပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွှယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ ထီ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရာတွင်အရောင်း / အကျိုးဆောင်ခြင်း၊ ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis, Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ရှိလုံခြုံသောထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချထားပေးရန်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ တွင်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်မှုအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သော Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရှိသော၊ နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်များ၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Nevis မှပေးခဲ့သည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများအတွက်အကြီးစားအစုစုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံခန့်ခွဲသည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်တိုင်းပြည် ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကူညီသည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိ Corporate Services | Basseterre အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီများအတွက် Saint-Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Nevis တွင် Saint-Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းခြင်းအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗားစ်ရှိစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗားစ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်စိန့်ကစ်စ်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်နီဗစ်စ်နှင့်စိန့်ကစ်စ်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက် Nevis အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | Basseterre အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ကုန်သည်စာရင်း
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းအွန်လိုင်းမှလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်.
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိငွေစာရင်းများ Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်သင်အပ်နှံနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ၌တည်၏။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်သင်၏ HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့မှဝန်ထုပ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအဆင်သင့်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ စိန့်ကစ်စ်၊ နဗီးစ်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းစိန့်ကစ်နှင့် Nevis ၌တည်၏
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်.
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် Saint Kitts နှင့် Nevis မှ offshore သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွက်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်သင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအခြားသော VoIP ဖြေရှင်းမှုများ၊ Saint Kitts ရှိ Business VoIP နှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis Residial VoIP တို့ဖြစ်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis မှဖြစ်သည်
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ပါ ၀ င်သောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Software Development Company
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်, Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီအမြန်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့၏တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန် (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးလိုသောမည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည့်နေရာတွင်မဆိုပါဝင်ပတ်သက်ရန်ဖြစ်စဉ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကို Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis Business Corporation ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ သူသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis Business Corporation တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကမ်းလွန် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း စိန့်ကစ်နှင့် Nevis Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နစ်ဗစ်ကမ်းလွန် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗစ်ကမ်းလွန် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ပါဝင်ရန်အထောက်အပံ့ | စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိ NBCO တွင်ပါဝင်ခြင်း စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ NBCO တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ရှိ NBCO တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ရှိ NBCO တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis မှ NBCO တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Nevis၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis မှကမ်းလွန် NBCO မှတ်ပုံတင်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကမ်းလွန် NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis NBCO ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis NBCO ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Offshore NBCO , Saint Kitts နှင့် Nevis ကမ်းလွန် NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တွင် Nevis ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိ Nevis ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis, Offshore Nevis ကုမ္ပဏီများ Saint-Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint-Kitts နှင့် Nevis တွင်ကမ်းလွန် Nevis ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis ကုမ္ပဏီတို့တည်ထောင်ခြင်း စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ကမ်းလွန်နစ်ဗစ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗ်ကမ်းလွန်နီဗစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ Nevis သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis၊ Offshore Nevis LLC Formation တွင် Nevis LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Saint Kitts and Nevis, Offshore Nevis LLC တွင် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Offshore Nevis LLC ကို Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis LLC တို့ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ကမ်းလွန်နဗီး LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ကမ်းလွန်နီဗစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ | NBCO ကို Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ | Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်သင်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis မှ Offshore ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Offshore ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့မှကူညီနိုင်သည်။ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်မှစိန့်ကစ်နှင့်နီဗဲစ်တို့မှကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီများမှာစိန့်ကစ်နှင့်နီဗဲစ်တို့မှထောက်ပံ့သောမြို့များဖြစ်သည် - Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Basseterre မှဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Basseterre မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Basseterre ကနေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Basseterre အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
သငျသညျစိန့်ကစ်နှင့် Nevis အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူကူညီနိုင်မလား?
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကို Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအေးဂျင့်များနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။ Basseterre ရှိမြို့ကြီးများမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Basseterre ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Basseterre ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Basseterre ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ, Basseterre ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ Basseterre ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Basseterre အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Basseterre ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Basseterre ရှိ Basseterre မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Basseterre ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Basseterre အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Basseterre တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီ၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Basseterre ၌တည်၏။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ Basseterre အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မြို့တွင် Basseterre တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Basseterre ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသား
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Saint Kitts နှင့် Nevis | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ Basseterre
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစရိတ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီများသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Saint Set Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Basseterre ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Basseterre ၌ထည့်သွင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis Business Corporation တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်သင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလား စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိ NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း?
ဟုတ်ကဲ့၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ကစ်များနှင့်နီဗစ်နီဗစ်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများကိုစိန့်ကစ်များနှင့်နီဗစ်တို့တွင် Offshore Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်ရှိနီဗစ်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis ကမ်းလွန် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ကမ်းလွန် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ကမ်းလွန် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint-Kitts နှင့် Nevis ရှိ Offshore Nevis Business Corporation ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကို Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis များနှင့်နေထိုင်သူများမဟုတ်သော Saint Kitts နှင့် Nevis NBCO ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint-Kitts နှင့် Nevis ရှိ Offshore NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ စိန့်ကစ်တွင် NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ကစ်နှင့် Nevis၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီး NBCO တွင် NBCO ဖွဲ့စည်းခြင်း NBCO ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗ်စ်ကမ်းလွန် Nevis NBCO ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နပ်စ်ကမ်းလွန်နစ်ဘီ NBCO မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်နှင့်နပ်စ်ကမ်းလွန် NBCO၊ နှင့် Nevis၊ Saint Kitts နှင့် Nevis NBCO တို့ပူးပေါင်းမှု၊ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis တို့တွင် NBCO ပါဝင်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့နှင့်မနေထိုင်သူများ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့နှင့်အတူနေထိုင်သူမဟုတ်သူများ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Offshore Nevis ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ကုမ္ပဏီများကိုတည်ထောင်ခြင်းစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်နီဗစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ကမ်းခြေနဝီကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ကမ်းလွန်နစ်ဗစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များ၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်နီဗစ်ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်အစုရှယ်ယာပါဝင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့နှင့်အတူနေထိုင်သူများမဟုတ်သော Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Non-Offshore Nevis LLC တွင်စိန့်ကစ်များနှင့် Nevis တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis, Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Offshore Nevis LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis Offshore Nevis LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Offshore Nevis LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Offshore Nevis LLC ပေါင်းစည်းခြင်း Saint Kitts နှင့် Nevis Nevis LLC တို့ပါဝင်သည်။ Nittis LLC သည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တွင်တည်ရှိသည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ NBCO ကို Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ထည့်သွင်းပါ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင် Nevis ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင် Nevis LLC ကိုထည့်သွင်းပါ
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိဟုသုံးစွဲသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သည့်စကားလုံးများဖြစ်သည်။ စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ၌တည်၏။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ | Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရမည်သို့မဟုတ်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်သုံးသင့်သနည်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ Saint Kitts ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စာရင်းကိုင်များပြားလှသောပမာဏသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများပေးပါသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Nevis ကုမ္ပဏီများသည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများအနေဖြင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်သူများအတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအထူးအထောက်အပံ့ပေးပြီး Basseterre တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်။ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လိုလျှင်၊ သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Basseterre တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတွင်တည်ထောင်ရန်အတွက်၊ Basseterre, ဒါမှမဟုတ်, Basseterre အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်, Basseterre အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်, Basseterre အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Basseterre အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏တရားဝင်ဆိုဒ်များ
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏သံရုံးနှင့်အမြဲတမ်းမစ်ရှင်
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗဲစ် - ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
စိန့်ကစ်နှင့် Nevis သတင်းများ
Nevis သမိုင်း & ထိန်းသိမ်းရေး Society က
ဘီဘီစီသတင်းနိုင်ငံတိုင်း၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်
Wikipedia: Saint Kitts နှင့် Nevis
Open Directory စီမံကိန်း - စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်
The World Factbook - Saint Kitts နှင့် Nevis
SAINT KITTS AND NEVIS ရှိဘဏ်များစာရင်း
MAGNATE PREMIER ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လီမိတက် https://www.magnatebank.com/
RBTT ဘဏ် (SKN) လီမိတက် http://www.privatebanking.com/directory/central-america-st-kitts-nevis-charlestown/banks/rbtt-bank-skn-limited
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နဗီးရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့မထောက်ပံ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ စိန့်ကစ်များနှင့်နီဗစ်စ်သို့ဖြစ်စေ၊
●စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ် (သို့) မှသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုလုပ်ခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ဥပဒေအောက်မှလူမည်းစာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်သို့မဟုတ်အတွင်းမှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်သို့အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များသို့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်နျူကလီးယားနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်၊ ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်ပစ္စည်းများ။
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိန့်ကစ်နှင့်နဗီးစ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ စမ်းသပ်ခြင်း။
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်သို့မဟုတ်ရှိစခန်းတွင်းရှိလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်သို့လည်းကောင်း၊
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းချမှုတွင်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊
●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်, စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် ဘဏ်အကောင့်, စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် ယုံကြည်မှု စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-kitts-and-nevis-nbco/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-kitts-and-nevis-nbco/